China 27inch na-ere ọkụ diamond polishing pads iji mee ka elu na-egbuke egbuke Imepụta na ụlọ ọrụ | Bontai
27inch paịlị na-egbuke egbuke diamond na-ere ọkụ iji mee ka elu dị elu
27inch Burnishing diamond polishing pads na-eme ka elu gloss elu, akọrọ polishing ụdị ọ bụla nke ala. Soft na nwayọọ n'ala. Edepụtara na kasị elu àgwà na arụmọrụ ụkpụrụ. Nzọụkwụ ise nke grits: 400#, 800#,1500#, 3000#, 5000# na ndị ọzọ grits nwere ike ahaziri dị ka rịọrọ.
Ihe: Fiber / sponge + diamond
Usoro ọrụ: Nchacha akọrọ
Akụkụ: 3" ruo 27" dị
Ngwa: Iji na-egbuke egbuke dị elu na-ehichapụ elu ala
27inch paịlị na-egbuke egbuke diamond na-ere ọkụ
Fiber/ ogbo/ ntutu isi + diamond
3" ruo 27" dị
400#, 800#, 1500#, 3000#,5000# (Enwere ike ịhazi grits ndị ọzọ)
N'ihi na polishing ihe na terrazzo wdg ala na elu glossness
1.Velcro nkwado maka mgbanwe ngwa ngwa.
2.High glossness na nghọta zuru oke
27 inch dị elu ọsọ akọrọ polishing diamond abrasive pads, ike ịdịte aka, elu arụmọrụ, ezi polishing mmetụta, ọtụtụ ebe na-agba ọsọ polishing, na-eme ka ala ala ọzọ kenkowaputa na ọzọ textured.
Nnukwu dayameta polishing pad, egweri nwere ike ịkpọtụrụ n'ala n'elu ebe, nwere ike n'ụzọ dị irè na-eme ka polishing oge belata 50%, belata ọrụ na-akwụ ụgwọ.
Ngwaahịa niile gafere asambodo ISO9001.
Maka ahịa ụlọ na mba ụwa niile.
Isi ngwaahịa. Ihe na-egweri diamond, ngwaahịa resin polishing, wheel diamond egweri, ihe mgbochi diamond, eriri eriri, wdg.
Dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Bontec emepụtala ihe ndị dị elu ma sorokwa na-emepụta ụkpụrụ mba maka ihe ndị siri ike na ahụmahụ 30 Years. Ụlọ ọrụ anyị nwere ike ọrụ nkà na ụzụ siri ike na ike R & D siri ike. Ọ bụghị nanị na anyị nwere ike ịnye ngwá ọrụ dị elu, kamakwa nkà na ụzụ ọhụrụ iji dozie nsogbu ọ bụla mgbe sanding na polishing ụdị nile nke ala.Stable na ntụkwasị obi àgwà mmesi obi ike, Bangtai na-ewe nchekwa ụkpụrụ dị ka isi. nke mmepe ngwaahịa, na ngwaahịa agafeela ISO9001 asambodo. Kwesịrị ekwesị maka iji ya na ndị na-emepụta ihe n'ala.Wide dịgasị iche iche nke ngwaahịa na nkọwa zuru ezu. Nkwenye dị mma, arụmọrụ dị elu, ọnụ ahịa azụ azụ dị elu. Na njikwa ọrụ ndị ahịa na-elebara anya, mee ka ndị ahịa nwee ahụ iru ala iji.
Nke gara aga: 3 ″ resin diamond polishing pad mmiri polishing maka ihe
Osote: Ihe mkpuchi mkpuchi resin HTC diamond maka ala kọnta
150mm nkwado ndabere
17" paịlị na-acha ọkụ
Ihe mkpuchi ala 17 "inch
20 "Pads na-ere ọkụ
20" ihe mkpuchi ihe
27" paịlị na-acha ọkụ
27 inch diamond polishing
Nzọụkwụ 3 ihicha mpe akwa
Mpempe mkpuchi 3 nzọụkwụ 3
Ihe mkpuchi mkpuchi 5 inch
Mpempe mpe mpe akwa
Mpempe akwụkwọ maka kọmpụta
Gbanyụọ pad mkpuchi diamond
Mpempe ọkụ na-ere ọkụ maka kọmpat
Pads na-ekpocha ọkụ
Ihe mkpuchi mkpuchi China
Ihe mkpuchi mkpuchi ala diamond China
Ihe mkpuchi ala China
Mpempe ala na-ehicha ihe
Mpempe akwụkwọ na-ehicha ihe
Ihe mkpuchi mkpuchi diamond Concrete
Ihe mkpuchi ọla edo edo edo abrasive
Mpempe akwụkwọ na-ehicha akwa diamond
Ihe mkpuchi ọla edo diamond na-ere ọkụ
Ngwa Nchacha diamond
Mpempe ala na-egbuke egbuke akọrọ
Mpempe akwụkwọ na-edozi eriri
Pad na-ere ọkụ n'ala
Mpempe mmiri na-ehicha ala
Ngwa Ndochi Ala
Ngwá ọrụ HTC Diamond
Ngwá ọrụ Lavina Diamond
Ogologo ndụ Pads
Emere ya na China Edge Floor Pads polishing
Mpempe ala na-ekpochapụ
Ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Mpempe akwụkwọ polishing maka ihe siri ike
Mpempe akwụkwọ ihicha mma
Mpempe mgbochi mkpuchi ogbo diamond resin diamond
Ihe mkpuchi resin .Ogbo nhicha nhicha .Ogbo na-ere ọkụ
Mpempe akwụkwọ na-akpụ akpụ
Mpempe akwụkwọ na-ekpuchi Sponge
Mpempe akwụkwọ na-ekpuchi ogbo
Mpempe akwụkwọ na-ehichapụ spnge
Nkwadebe dị n'elu ala igwe ihe
Ihe mkpuchi Velcro na-ehicha akwa akwa akwa akwa akwa na-enwu gbaa
Mpempe akwụkwọ na-acha ọcha
Onye na-emepụta China na-ere ahịa n'ala diamond na-ehicha akwa mkpuchi mkpuchi
7 "180mm Velcro kwadoro diamond polishing ...